Vaovao - Ny fanavaozana feno sy fampidirana ny gorodona PVC dia mety hampisy fifaninanana amin'ny tsena
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka ny fitaovana gorodona, ny olona dia tsy voafetra intsony amin'ny gorodona. Ho fanampin'ny gorodona, ny gorodona PVC dia afaka mamaly tsikelikely ny filan'ny mpanjifa amin'ny fahasalaman'ny atmosfera.
Fanavaozana feno ny gorodona PVC hahavoa ny tsena
Ny gorodona PVC dia antsoina koa hoe "fitaovana maivana". Niditra ny tsena sinoa izy tamin'ny voalohan'ny taona 1980. Izy io dia karazana haingon-trano fanaingoana gorodona maivana vaovao izay tena malaza manerantany, indrindra any Eropa, Amerika sy Azia, Japon ary Korea Atsimo. Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fivoaran'ny fiarahamonina, ny tsena PVC dia mampiseho dingana fifaninanana mahery vaika koa, indrindra eo ambanin'ny fampiroboroboana ny e-varotra, mihanaka izaitsizy ity fironana ity, ary ny indostrian'ny gorodona PVC koa hiatrika dingana lehibe amin'ny fanovana.
Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny PVC dia miatrika dingana goavana amin'ny fanavaozana. Ny fanamafisana ny fanitsiana ara-drafitra sy ny fahazoana fitantanana mavitrika no fironana lehibe amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana ny sehatry ny gorodona PVC. Fantatra fa na dia vokatra vaovao aza ny gorodona PVC, dia notadiavina be tany amin'ny tsena ivelany izy io noho ny fahombiazan'ny kalitao sy ny fahombiazany amin'ny vidiny lafo. Raha vantany vao fantatry ny ankamaroan'ny mpanjifa ao an-toerana ny tombony azo avy amin'ity fitaovana vaovao ity, dia azo antoka fa hanangana tafio-drivotra izy ireo.
Araka ny tatitra, taorian'ny fampidirana marobe ny indostrian'ny gorodona PVC, nisy orinasa vaovao vaovao misy fiatraikany nihaza, ary orinasa mihemotra sasany izay mifikitra amin'ny maodely fivarotana nentim-paharazana no hiatrika fanafoanana. Izany koa no fironana tsy azo ihodivirana amin'ny fivoaran'ny fotoana.
Ny gorodona vita amin'ny PVC dia afaka mandray làlana fanahafana ambony kokoa ihany koa
Hitan'ny mpanao gazety teny an-tsena fa ny gorodona PVC ankehitriny dia manana loko marobe, fa ny ankamaroan'izy ireo dia manaraka ny làlambe simika avo lenta, ao anatin'izany ny firakofana karipetra manahaka, firafitra vato, firakofana hazo, sns. manan-karena sy tsara tarehy ny loko. Amin'izao fotoana izao, ny malaza indrindra dia ny gorodon'ny hazo alaina sy ny gorodona vita amin'ny marbra. Ny firafitra ala ala-tahaka dia manana endriny tsara sy fahatsapana voajanahary sy vaovao amin'ny gorodona hazo. Ny asa tanana voadio kokoa aza dia manana ny dikany mahazatra sy voajanahary amin'ny gorodona hazo fahagola; ny firafitra vita amin'ny marbra. Izy io dia manana endrika voajanahary voajanahary amin'ny vato voajanahary, izay saika mitovy amin'ny gorodona hazo marbra sy marbra amin'ny resaka effets visuels et ny fahatsapan'ny tongotra.
Ankoatr'izay, satria ny fitaovana PVC dia azo tapahina tsy amin'antony amin'ny antsy mahasoa, dia mamaky ny fetra ara-materialy amin'ny gorodona mahazatra izy io ary azo zaraina amin'ny loko samihafa amin'ny fitaovana, mba hahafahan'ny olona manome lalao feno ny fahaiza-mamorona sy hihaona amin'ilay olona. filan'ny fomba firavaka samy hafa. , Mba hahatratrarana ny vokatra haingon-trano izay sarotra tanterahana ny gorodona hafa, miaraka amin'ny fanapahana manokana sy ny fahaiza-mamorona, ny habaka honenana dia ho lasa manokana sy kanto kokoa.